Home News Faah-faahin:-Askari Lagu Toogtay Dulleedka Magaalada Muqdisho!!
Faah-faahin:-Askari Lagu Toogtay Dulleedka Magaalada Muqdisho!!
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya duleedka magaalada Muqdisho, rag hubeysan ayaa duhurnimadii maanta Tabeelaha Sheekh Ibraahim waxa ay ku dileen askari ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya.
Askariga la dilay oo lagu magacaabi jiray Mahad Macow Afrax ayaa ka mid ahaa ciidanka ilaalada xarunta Garasbaaley, sida ay inoo sheegeen masuuliyiin ka tirsan maamulka Garasbaaley.
Ciidanka ammaanka dowladda federaalka ayaa waxa ay tageen goobta uu dilka ka dhacay, halkaasi oo ay ka qaadeen meydka marxuumka la dilay, waxayna ciidanka sameeyeen baaritaan aanay jirin cid lagu soo qabtay.
Dilalka inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho ee lala beegsado ciidamada waxaa geysta ururada hubeysan ee Shabaab iyo Daacish, inta badan ma suuragasho in gacanta lagu dhigo dableyda.
Previous articleKolanyo Katirsan Ciidamada Xasilinta Oo U Ambabaxay Deegaano Hoosyimaada Gaalkacyo
Next articleMaamul Loogu Magac-daray Koonfur Bari Galgaduud oo lagu dhawaaqay iyo Galmudug oo Labo loo kala jebiyay!!
Shirkii Diri Dhaba oo looga dhawaaqay in Cabdi Ileey Xilka looga...